ဖုန်းဆိုတာ ပန်းလေးတွေကြွေစေဖို့ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်.....
(‘ ဖုန်းဆိုတာ ပန်းလေးတွေကြွေစေဖို့ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်)
အစ်မ အစ်မ သိလား’
‘သမီး မှာ ချစ်သူ ရှိနေပြီ’
‘ပြပါဦး ညီမ ရဲ့’
‘ဟောဒီမှာကြည့် ‘ မတ်တပ်ရပ်လျက် ရိုက်ထားသောယောကျာ်းလေးတစ်ဦး၏ပုံ
‘အမယ် မဆိုးပါဘူး ချောသားဟ ‘
‘နာမည်က ဘယ်သူလဲ ဘာလုပ်လဲ ဘယ်မှာနေလဲ’
‘အဟီး ဘာမှမသိဘူး နာမည်လေးတစ်ခုဘဲသိတာ’
‘ကိုထက်လွင်တဲ့ အစ်မ ရဲ့’
‘ဒါကြောင့် အပျိုကြီး ဖြစ်နေတာ’ ‘ဒီခေတ်က online ခေတ်လေ အစ်မ ရဲ့’
‘online ခေတ် online ပေါ်ကတွေ့တာ အစ်မ ရေ’
‘ဟယ် အဲဒါကိုနင်က ချစ်သူ ထားတယ်’
‘အပျော်ပေါ့ အစ်မ ရယ် ”online ပေါ်မှာ ဘယ်သူကအသားလာထိလို့ရလို့လဲ အပြင်မှာ ရည်းစား ထားရင်တောင် ဟိုတို့ဒီတို့ ခံနေရဦးမယ်။
အခုတော့ အေးဆေးစကားလေးဘာလေးပြော။ ပုံလေးဘာလေး ပို့ပေးရုံဘဲ။
ဘယ်လောက်မိုက်လဲ။ အပြင်က ချစ်သူ တွေထက်တောင်စိတ်ချရသေး’
‘မသိတော့ပါဘူးအေ။ ညည်းတို့ခေတ်က အဆန်းတွေချည်းဘဲ။ ကျုပ်တို့တော့အံ့သြပြီးရင်း အံ့သြနေရတော့တာဘဲ။ ဂရုတော့စိုက်ဦးနော်။ ကိုယ့်ကိုဘာထိခိုက်လာနိုင်မလဲစဉ်းစားဦး။’
‘အမလေး အစ်မ က မရှိရှိတာတွေ တွေးပူနေပြန်ပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိခိုက်မယ့်အလုပ်မျိုးတော့ သမီးကလုပ်ပါ့မလားလို့။ စိတ်ချပါအစ်မရဲ့။ သတိထားပါ့မယ်နော်။
‘မေနှင်း ရေ မေနှင်း’ အမေ့ခေါ်သံကြောင့်သတိပြန်ဝင်လာရင်း
‘ဟုတ် ဘာလဲ အမေ’ ‘ဒီမှာ ရဲတွေရောက်နေတယ်၊ ‘ နင့်ကို မေးစရာလေးတွေရှိလို့တဲ့
‘ ရဲတွေမြင်မှ ရဲရဲဖြာနေသော မြင်ကွင်း တစ်ခုဆီသို့ အတွေးက ပြန်ရောက်သွားသည်….. အဲဒီနေ့က မိညိုတို့အိမ်မှပြန်လာပြီးပြီးချင်း အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုဖြင့် ချက်ခြင်းခရီးထွက်ခဲ့ရသည်။ ခရီးကပြန်လာတော့ မိညိုတို့အိမ် အရင်ဝင်မိသည်။
‘မိညို ရေ မိညို’
‘အေးအေး သမီးလာလာ’ ‘ မိညို အိပ်ခန်းထဲမှာနေဖင်ထိုးနေပြီ အခုထိမထသေးဘူး’
‘မိညိုရေ မိညို ထတော့လေ’ အိပ်ခန်းထဲကိုဝင်လာကတည်းကခေါ်လာလိုက်တာ အိပ်ရာ ထက်မှာလည်းမတွေ့ရေချိုးခန်းရှေ့ဆီတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာသည်။ လော့ချထားလား မချထားလားကြည့်မိသည်။ လော့ချမထား…တဖြည်းဖြည်းချင်းတွန်းဖွင့်လိုက်သည်။ မြင်တွေ့လိုက် ရသည့် မြင်ကွင်းကြောင့် မူးမိုက် တုန်လှုပ်သွားသည်။ ရေချိုးခန်းတစ်ခန်းလုံး ရဲရဲနီလျက် လက်ကောက်ဝတ်မှ စီးကျလာသော သွေးများဖြင့် သွေးအိုင်ထဲဝယ် ခွေခွေလေးလဲကျလျက်ရှိသော ကျွန်မ၏ ချစ်လှစွာသောညီမလေး အမလေး… လုပ်ကြပါအုံးမိညို.. မိညို… မိညိုရေ …
‘ ညီမ ညီမ ရရဲ့လား ‘
‘အော် အင်း ဟုတ်ကဲ့’
‘ဟုတ်ကဲ့’ ဒိုင်ယာရီလေးတစ်အုပ် စာအုပ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်မည်မဟုတ်သော ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်၊ မြင်ကွင်း တွင် စတင်ပေါ်လာသည်။
ဒီနေ့ Facebook စသုံးတယ် Profile picture တင်ပြီးတာနဲ့ လူတစ်ယောက် အရင်စအပ်တယ်။ ပထမဆုံး Facebook friend မို့ ဝမ်းသာအားရလက်ခံလိုက်မိတယ်။ အကောင့်နာမည်က ထက်လွင်တဲ့ ကျွန်မ ပုံတင်တိုင်း ဘာပုံဖြစ်ဖြစ် likeပေးတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထက်လွင်ကို သံဃောဇဉ်တွယ်လာမိတယ်။
‘လှလားဟင် ‘ ဆိုရင် ‘နတ်သမီးလေးလိုလှပါ့ ‘ ‘ချောလိုက်တာမွတ်နေတာဘဲတို့’။ ‘စားပါဦး ‘ ဆိုရင် ‘တကယ်လာစားရမလား ‘ တို့ ‘စားကောင်းမဲ့ပုံဘဲနော်တို့ ‘ အမြဲတမ်း ကွန်မန့်ပေးတယ်။ အပြင်မှာမမြင်ဘူးပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာမိတယ်။
ကိုထက်လွင်ဆ်ိုတာ.. ဖြူဖြူချောချောနဲ့စိတ်ထားကောင်းမယ့် အစ်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်မှာပါလေ။ ဒီနေ့အိမ်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်။
Feelingsadဆိုပြီးဘာစာမှမရေးဘဲတင်ထားလိုက်တယ်။ တင်ပြီးပြီးချင်းမကြာခင် message တစ်ခုဝင်လာတယ်။ ကိုထက်လွင်ဆီကပေါ့။ ‘မင်္ဂလာပါကလေးမ’ ‘ဟုတ်ကဲ့ပါ အစ်ကို’ ‘ဘာတွေစိတ်ညစ်နေတာတုန်း’ ‘ဒီလိုပါဘဲအစ်ကိုရာ အိမ်နဲ့ကွိုင်တက်နေလို့’ ‘ မှန်မှန်ပြောစမ်း လူကြီး တွေကဆိုးတာလား ငါ့ညီမကဆိုးတာလား’
‘အေးပါ အေးပါ ငါ့ညီမကဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုလို့လာမေးကြည့်တာ’ ‘Bye ညီမ’ ‘စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါလေရစ်’ ‘ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို ကျေးကျေးပါ’ ချက်ခြင်းဆိုသလို out သွားခဲ့သောကြောင့် ကိုထက်လွင်အပေါ် ဆက်၍မေးချင် သိချင် ပြောချင်လာသည့်စိတ်များကို အတင်းမြိုချလိုက်ရသည်။
‘မင်္ဂလာပါ ညီမ’ ‘ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ ကိုထက်လွင်’ ‘ညီမ ကိုမေးစရာရှိတယ်’ ‘မေးပါ အစ်ကို’ ‘ညီမမှာအိမ်တွေခြံတွေရောင်းမယ့်အသိရှိလား’ ‘ဟင့်အင်းမရှိဘူး အစ်ကို ဘာလို့’ ‘အစ်ကိုတို့ပိုက်ဆံတွေပိုနေလို့ အဲဒါဝယ်ထားမလားလို့ အိမ်ဈေးတွေကတက်နေတော့လေ’ ‘အလဲ့ အလဲ့ သူဌေးပေါ့လေ ကြည့်စမ်း’ ‘မဟုတ်ပါဘူး သိန်းတစ်ထောင်လောက်ဘဲချမ်းသာတာပါ’
‘အမလေးလေး အဲဒါသူဌေးမဟုတ်ဘူးလား’ ‘နောက်တာပါ ညီမရာ ဘယ်ကချမ်းသာရမှာလဲ အမေ့ဘက်ကအမွေရလာလို့ပါ’ ‘အင်းပါ အစ်ကို တကယ်လို့ ညီမတို့ဝန်းကျင်မှာရှိရင် အစ်ကို့ကိုပြောမယ်လေ’ ‘ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီ ညီမ Bye’
အမယ့် ကိုထက်လွင်ကသူဌေးဟ ဒီလိုနှင့် နေ့တိုင်းစကားတွေလာပြောနေသော ကိုထက်လွင်အား သံဃောဇဉ်ကြိုးက နွယ်ပင်ကလေးလို ရစ်တွယ်လာခဲ့သည်။ ဟို အေးမို့ ဆိုတဲ့စာရေးဆရာမလေး ရေးသလိုပေါ့ ” သံယောဇဉ် ကြိုး ဘယ်သူပျိုး တန်ခိုး ရှိန်ဝါ ပြင်းလှတယ်။
” တကယ် တကယ် ကျွန်မ ရဲ့မခုန်ဘူးသေးတဲ့နှလုံးသားလေး စခုန်လာခဲ့ပါပြီ။ ‘ကိုထက်လွင်’ ‘ရှင် အဲ ဗျာ အဲ ညောင် အဲ ဗျောင်’ ‘အာ ပြောင်စပ်စပ်နဲ့’ ‘စပ်ရင်ရေသောက်လေ’ အာ သေတော့မယ်’ ‘မလုပ်ပါနဲ့ သားကလူပျိုလေးရှိသေးတယ်’ ‘ အင် သေလေ’ ‘သေနိင်သေးပါဘူး လူပျိုကြီး ဘွကကျွတ်မှ သေချင်သေပလေ့စေ’ ‘အခုထိချစ်သူမရှိသေးဘူးလား’ ‘ရည်းစားဆ်ိုလို့မူးလို့တောင်ရှုစရာမရှိဘူး’ ‘ရုပ်ဆိုးလို့နေမှာပါ’
‘အမယ် ဒီမှာကိုယ့်ပုံကြည့် ကြည့် ‘ ဆိုကာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပို့ပေးသည်။ ဟယ် ကိုရီးယား မင်းသားလေးလိုတကယ်ကိုချောလှသည်။
‘အလဲ့ အချောသားဘဲ’ ‘အဲဒါကိုရည်းစားမရှိဘူးဆိုတော့ မယုံနိုင်စရာဘဲ ‘ ‘တကယ်ပါ ညီမ ရေ’ ‘အရင်က တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်’ ‘အစ်ကိုအရမ်းချစ်ခဲ့တာ’ ‘ဒါပေမယ့်လည်းအစ်ကို့ကိုထားသွားခဲ့တယ်’ ‘Sorry ညီမ ရယ်”? သနားဂရုဏာစိတ်တို့တဖွဖွယိုဖိတ်လာသည်။ ‘ငါ့အစ်ကိုက ဘာပြစ်ချက်ရှိလို့ ပစ်သွားရတာတဲ့လည်း’ ‘မသိပါဘူး ညီမ ရယ်’
‘အစ်ကို ကတော့ချစ်နေမိဆဲဘဲ’ ‘အော် သူမှမချစ်နိုင်ဘဲလေ’ ‘အင်း အစ်ကိုအလုပ်လေးပေါ်လာလို့’ ‘တာ့တာ ညီမ ရေ’ ‘ဟုတ်ကဲ့’ အော်သစ္စာမရှိသည့် မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့်င့ါအစ်ကို ရင်ကွဲခဲ့တာပါလား စိတ်မကောင်းလိုက်တာအစ်ကိုရာ ဒီနေ့ဆို facebook သုံးတာ ခုနှစ်လတောင်ရှိတော့မယ်။
ကိုထက်လွင် နဲ့လည်း တော်တော်ရင်းနှီးလာပြီ။ နောက်ပိုင်းတော့ ကိုထက်လွင်စကားများက အနှောင့်အသွားမလွတ်တော့ ခက်တာက ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လဲအဲဒီအနှောင့်အသွားမလွတ်တာလေးတွေကိုဘဲ သဘောကျနေမိတာလေ။ ‘ညီမ ဖုန်းနံပတ်လေးပေးနိုင်မလား’ ‘ဟုတ်
၀၉××××××××’ ‘အစ်ကို့ဖုန်းကဒီမှာ’ ‘ ၀၉××××××××’ ‘ ဖုန်း ဆက်လို့ရတယ်မလားဆက်မယ်နော်’ ‘ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါ အစ်ကို’ ကိုထက်လွင် က ဖုန်းနံပတ်တောင်းသွားပြီးနောက်ပိုင်း ဖုန်း ကိုတကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေခဲ့မိတာကျွန်မပါ။
‘အင်း ညီမ အစ်ကိုပြောစရာရှိတယ်’ ‘ပြောလေ အစ်ကို’ ‘အစ်ကို့ကိုစိတ်မဆိုးရဘူးနော်’ ‘အာစိတ်ဆိုးစရာလား’ ‘အစ်ကိုို့ကိုမုန်းမသွားရဘူးနော်’ ‘အာ မမုန်းပါဘူး’ ‘ အစ်ကို့ကို ဘယ်လိုစိတ်ထားထား အခုလ်ိုမျိုးလေးဘဝက်ို မရုတ်သိမ်းသွားရဘူးနော်’
‘ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကိုရယ်’ ‘ပြောမှာဖြင့်ပြောပါ’ ‘ချစ်တယ် ညီမရယ်’ ‘တကယ်တော့ ညီမကိုချစ်နေမိခဲ့တာကြာပါပြီ Profile picture လေး စမြင်ကတည်းက ချစ်မိသွားတာပါ’ ‘တကယ်ပါ မလိမ်ပါဘူး ညီမရယ်’
‘ညီမမျက်နှာလေးမြင်နေရရင်အစ်ကိုအလိုလိုပျော်နေမိတာ’ ‘ညီမတင်သမျှပုံတွေ အစ်ကို အကုန် save လုပ်ထားတယ်’ ‘ဟယ် တကယ်လား’ ‘ဟုတ်တာပေါ့ညီမရယ်’ ‘အစ်ကိုက ငယ်ချစ်ဦးကြောင့် အချစ် ကို အရမ်းကြောက်နေမိခဲ့တာ’
‘ညီမ နဲ့တွေ့မှသူ့အလိုလို အချစ်က ပြန်ရှင်သန်နိုးကြားလာခဲ့တယ်’ ‘အစ်ကို့ကို မချစ်နိုင်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်နော်’ ‘ စိမ်းကားဖို့တော့မကြံလိုက်ပါနဲ့နော်’ ‘အစ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်’ ‘အစ်ကို့ကိုပြန်ချစ်ပါနော်’ ‘အင်း စဉ်းစားရဦးမယ်လေ’ ‘စဉ်းစားပါ စဉ်းစားပါ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလက်တွဲသွားရမယ့်ကိစ္စဘဲ’
‘သေချာစဉ်းစားပါ’ ‘ပြီးရင်ချစ်တယ်လို့ဖြေပေးပါနော်’ ‘အင် ပိုင်စိုးပိုင်နင်း’ ‘ဒီလိုစီးပိုးနေရင်တော့ မချစ်နိုင်တော့ပေါင်’ ‘အာ အာ မလုပ်ပါနဲ့အစ်ကိုအဖြေကောင်းကိုစောင့်မျှော်နေမယ်နော်’ ‘အရမ်းချစ်တယ်ကလေးမရယ်’ ‘တော်ပါ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း’ ‘တကယ်ချစ်လို့ပါကွာ’ ‘စပါယ်ရှယ် ကိုချစ်တာ’ ‘တော်ပြီ’ ‘အာ အပိုတွေ တော်ပြီ တော်ပြီ ဒါဘဲ ဒါဘဲ’ Internet ကို ပိတ်လိုက်သလိုမျိုး နှလုံးသားကိုလည်း ပိတ်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲနော်…ရင်တွေခုန်လွန်းလို့လေ။
‘ချစ်တယ် ကို’ ‘တကယ်လားဟင်’ ‘တစ်ကယ် နှစ်ကယ် သုံးကယ် လေးကယ်’ ‘တကယ်လားလို့’ ‘အင်းပေါ့လို့’ ‘ဟ ဟ ဟ ပျော်လိုက်တာ ညီမ ရာ’ ချက်ခြင်း Phone call ဝင်လာသည်။ ကိုထက်လွင်ဆီက.. ‘အင် ဘာလည်း online ကလည်းပြောလို့ရတာဘဲကိုရယ်’ ‘မရပါဘူး ဒီအသံချိုချိုလေးကိုကြားချင်သေးတာပေါ့လို့’ ‘ချစ်လားဟင်’
‘ဘယ်နှစ်ခါမေးနေမှာလဲ’ ‘သေတဲ့အထိ’ ‘တကယ်ကော တစ်သက်လုံးချစ်မှာမို့လား’ ‘အခုဘဝမှ နောင်သံသရာအဆက်ဆက်ထိ’ ‘အပိုတွေသိပ်ပြောတာဘဲသိလား’ ‘တကယ်ချစ်လို့ပါ ကလေးမရယ်’ ‘ကိုယ့်ကို ချစ်လားဟင်’ ‘အရမ်းချစ်တယ် ကို’ ဖုန်း ကို ဆတ်ခနဲချပစ်လိုက်သည်။
တဆတ်ဆတ်ခုန်နေသောရင်ကိုတော့ ချပစ်လို့မရပါလားကွယ်.. ဒီလိုနှင့်..ဖုန်း တွေပြော Messageတွေပို့နှင့် အပြင်မှာတစ်ခါမှ မတွေ့ဘူးကြပေမယ့် လေလှိုင်းထဲမှ ကြင်နာယုယမှုလေးတွေကိုပင် ကျေနပ်နေမိခဲ့သည်။
ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာဒီလောက်ပျော်စရာကောင်းရင် အစောကြီးကတည်းကထားခဲ့ပါတယ် ဒိုင်ယာရီလေးရယ် ‘တောက် အချိန်တွေနှမြောလိုက်တာ ‘ ဟိဟိ ဒီစကားကြားရင်တော့ မမ ကျွန်မကိုထုတော့မည်။
မမကို ချစ်သူသက်တမ်း သုံးလပြည့်မှ ဖွင့်ပြောပြမည်ဟုကြံထားခဲ့သည်။ ဒီနေ့က ချစ်သူသက်တမ်းသုံးလပြည့် မိတ်ဆွေဖြစ်တာ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်လပြည့်တဲ့နေ့ မနက်စောစောထုံးစံအတိုင်း မမအိမ်ကိုပေါက်ချလာသည်။ ကိုထက်လွင်ဓာတ်ပုံကိုပြရင်းမိတ်ဆက်ပေးမိတော့ ‘အချောသားဟ ‘ဆိုပြီး အပြင်မှာကောမြင်ဘူးလို့လားမေးသည်။
ဟင့်အင်း Online ချစ်သူလေဆ်ိုတော့ တော်တော့်ကို နားမလည်နိုင်သည့် မျက်နှာအမူအယာဖြစ်သွားသည်။ ‘သတိတော့ထားနော် ‘ လို့ပြောတော့ ‘မမ ကလည်း online မှာချစ်သူဖြစ်တာ သမီးအသားတောင် သူထိလို့မရဘူး ‘ ဆ်ိုတော့…စိတ်ချသွားဟန်ဖြင့် ‘မမ ခရီးသွားရဦးမယ်၊ တစ်ရက်လောက်တော့ကြာမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နော်၊ မမက အလုပ်တွေရှုပ်မှာမို့ ဖုန်းတောင်ဆက်နိုင်မယ်မထင်ဘူး’
‘ဟုတ်ကဲ့မမ စိတ်ချပါ’ မမ ထွက်သွားပြီးသည်နှင့် မကြာခင် ကိုထက်လွင်ဆီမှ ဖုန်းဝင်လာသည်။ ‘ညီမ အစ်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားသွားရတော့မယ်’ ‘ညီမနဲ့အရမ်းတွေ့ချင်မိတယ်ကွာ’ ‘အစ်ကိုနဲ့အပြင်မှာတွေ့နိုင်မလား’ ‘စိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက်ဝမ်းနည်းလာမိသည်’ ‘အင်းလေ အစ်ကို ဘယ်မှာတွေ့မလဲ’
‘လူရှင်းတဲ့နေရာ စကားအေးဆေးပြောလို့ရမယ့်နေရာပေါ့ ညီမရယ်’×××အဲ့ဒီနေရာက်ိုလာခဲ့နော်’ ‘ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်၊ အစ်ကို နိုင်ငံခြားမသွားခင် အရမ်းကိုတွေ့ချင်နေမိလို့ပါ’ ‘အင်းပါ အစ်ကိုရယ်’ မနက်အိပ်ယာထသည်နှင့် ကမန်းကတမ်းရေချိုးပြီး ချိန်းထားသောနေရာသို့ အသည်းအသန်သွားချင်နေမိသည်။ စိတ်ထဲမှာလည်းကို့ ကိုအရမ်းတွေ့ချင်နေသည်။
ချိန်းထားသည့်နေရာရောက်တော့တကယ့်ကိုလူပြတ်သောနေရာပင်။ ကျွန်မကိုတွေ့သည်နှင့် သူထိုင်နေရာက အပြေးထလာပြီး ကျွန်မကို တင်းတင်းဖက်ထားသည်။ ကျွန်မငြင်းဆန်ချင်စိတ်မရှိသလို ရုန်းကန်ချင်စိတ်လဲမရှိ။
စိတ်ထဲမှာဝေးရတော့မည်ဆ်ိုသောအသိတစ်ခုက နောင်လာမည့်အနမ်းများနှင့် အထိအတွေ့ အပွတ်အသပ် အချော့အမြူများကိုပါလိုက်လျောပေးစေခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းရှလာပြီး ကတုန်ကယင်ပါ ဖြစ်လာသည့်အတွက် ‘တော်ပြီ ကို ရယ် ‘ ဟုအသံဖျော့ဖျော့နှင့်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ကိုထက်လွင်က လူခြင်းခွာသည်။ ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ထားရင်း ‘ချစ်တယ်ညီမရယ်အရမ်းချစ်တာဘဲ အစ်ကိုကတစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်’ ‘အင် တစ်နှစ်တောင်’ ‘ဟုတ်တယ် ညီမရယ် ။
ဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်မထားနိုင်တော့ဘဲ အကုန်လွတ်ထွက်ကုန်တာပါဗျာ ”’ခွင့်လွှတ်ပါနော် ညီမ၊ ခွင့်လွှတ်ပါနော်’ ‘အစ်ကို့ကိုအထင်အမြင်သေးစိတ်ပျက်သွားပြီလားဟင်’ ‘စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်’ ‘မဆိုးပါဘူးလို့’ ‘အစ်ကို တစ်ခုလောက် ထပ်တောင်းဆိုလို့ရမလားညီမ ‘တစ်ခုတည်းပါကွာ တစ်ခုတည်းပါနော်’ ‘ညီမကို အစ်ကိုတစ်နေရာခေါ်သွားပါရစေ’
‘လိုက်မယ်မလားဟင်’ အသိစိတ်တို့က ဘာကိုဆိုလို၍ ဘာက်ိုရည်ညွှန်းနေမှန်းသိသော်လည်း အစောကအထိအတွေ့အပွတ်အသပ်တို့ကြောင့်ခုန်နေသောနှလုံးသားကမငြင်းဆန်ခဲ့နိုင်တော့… ဤသို့ဖြင့် တည်းခိုခန်းတစ်ခု၏အခန်းတစ်ခန်းဆီသို့ ကျွန်မတို့နှစ်ဦးသား ရောက်သွားခဲ့သည်။
ခုတင်ဘေးမှာခြေစုံရပ်ရင်းတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ရင်းမှသည်……. ကိစ္စဝိစ္စများပြီးဆုံးတော့ နှစ်ယောက်သားမောမောနှင့် ဖက်လျက် အိပ်ပျော်သွားမိသည်ကို သတိရမိသည်။ ကိုယ်လက်တို့က တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲနေသည်။
ဘေးကိုကြည်လိုက်တော့ သူမရှိတော့။ အတွေ့ထူးအငွေ့ထူးမို့ ရူးမတတ်ခံစားရသည်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်သူအား အပျိုစင်ဘဝကို ပေးအပ်လိုက်ခြင်းသည် စိတ်ထဲတွင်မည်မျှကြည်နူးမိကြောင်း လက်တွေ့ကြုံမှပင်.. ကိုက မနက်ဖြန်စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးမယ်ပြောတာပဲ။
အခုတော့ဘယ်သွားနေလဲမသိ။ မြန်မြန် ပြန်လာခဲ့ပါတော့ ကိုရယ်..ဒီမှာညီမလွမ်းလှပါပြီ။ ထိုစဉ် အခန်းဝတံခါးက တဖြည်းဖြည်းပွင့်လာသည်။ ‘ ကိုကိုလားဟင်’ ‘ကို ပြန်လာပြီလား’ ဟာ ကိုကိုမဟုတ်၊ လူစိမ်းတစ်ယောက် ‘ရှင် ရှင် ဘယ်ခန်းထဲဝင်လာတာလဲ ပြန်ထွက်သွား ပြန်ထွက်သွား’
‘ဟား ဟား’ ‘ရှင် ရှင် ကျွန်မကိုကိုရောက်လာရင် ရှင့်ကိုသတ်မှာနော်’ ‘ကိုကို ပြန်မရောက်ခင်ထွက်သွား သွား လို့ပြောနေတယ်’ ‘အေးဆေးပေါ့ကောင်မလေးရယ်’ ‘ညည်းကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတာ ဘာလို့နှင်ထုတ်နေတာတုန်း’ ‘ရှင် ဘာစကားပြောတာလဲ’ ‘ဟုတ်တယ်လေ..မင်းသိပ်ချစ်၊ သိပ်မြတ်နိုးရပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်းကိုကိုက မင်းကို ငါ့လက်ထဲရောင်းစားသွားတာလေ’ ‘ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်’
‘ဒါလေးကို ကြာကြာစောင့်ပြီးမှ ခွင်ဖန်လိုက်နိုင်လို့ အပျိုဖူးလေးတော့ ခြွေပါရစေဆိုပြီး ပိုက်ဆံထပ်ပေးတာတောင်မယူဘဲ အပျိုရည်ဖူးလေး ခြွေသွားသေးတယ်’ ‘ဟား ဟား လာပါကွာ’ ‘မင်းကိုကိုနဲ့တုန်းကအရမ်းကောင်းတယ်မလား’ ‘မင်းကိုကိုထက် တို့ကဝါရင့်ပါတယ်’ ‘မင်းကိုကိုထက်ကောင်းစေရမယ်’ ‘လာထား ‘ ဆိုကာကုတင်ပေါ်ရောက်လာသည်။
ခွန်အားရှိသမျှ ရုန်းကန်အော်ဟစ်ပါသော်လည်း….. ဘေးတစောင်းလှဲ မျက်ရည်တသွင်သွင်စီးကျနေရင်း ခွေခွေလေးလှဲနေမိသည်။ လူကြီးက အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်ရင်း ‘ ဒီမယ်ကလေးမ မင်းကြိုက်တဲ့ဆီတိုင် ပြောချင်တာက အခုငါတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်။ မင်းတိုင်တာနဲ့ online ပေါ်ပြန့်ပြီးသားဘဲ သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်’ ‘လုပ်ရဲရင်တော့ လုပ်ကြည့်ပေါ့ကွာ ဟား ဟားဟား ‘ အားရပါးရရယ်ကာထွက်သွားသည်။
သွားပြီ၊ သွားပါပြီ.. ကျွန်မ ဘဝတစ်ခုလုံး ရေစုန်မျောပါသွားသလို ခံစားမိသည်။ ကိုရယ် ညီမရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရက်တယ်နော်၊ ကျွန်မ ကို ရောင်းစားသွားတာဆို။ ခွင်ဖန်သွားတာဆို။ ဟုတ်လား။ ပြန်လာခဲ့ပါကိုရယ်။ကိုမရှိတုန်းအဲလူကြီးလာစော်ကားသွားတာနေမှာပါ။
ကိုပြန်လာရင်ကျွန် မကိုလက်ထပ်မှာပါ နော် .. နော်။ ဖုန်းဆီကိုလက်လှမ်းသည်။ ကို့ဖုန်းကိုလှမ်းခေါ်သည်။ စက်ပိတ်ထားသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါခေါ်သည်။ စက်ပိတ်ထားသည်။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ရင်းနှီးမှုတွေ၊ ချစ်ခဲ့မိတဲ့အချစ်တွေက အခုလိုခြွေချခံရဖို့ဘဲလား။
‘ ရက်စက်လိုက်တာ ကို ရယ်။ ရက်စက်လိုက်တာ။’ မျက်ရည်ကိုထိန်း စိတ်ကိုသိမ်း၍ ဒယီးဒယိုင်ဖြစ်နေသောခြေလှမ်းတို့ဖြင့် အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မိသည်။ အိပ်ခန်းထဲရောက်မှ တံခါးကိုပိတ်ရင်း ခေါင်းအုံးပေါ်မျက်နှာအပ်၍ အားရပါးရငိုချမိသည်။
တစ်ကိုယ်လုံး အထိမခံနိုင်လောက်အောင် ကိုက်ခဲနေသော်လည်း နှလုံးသားရဲ့နာကျင်ကိုက်ခဲမှုက်ိုမှီနိုင်ပါဦးမလား ‘မမ ကလည်းဒီနေ့မှခရီးထွက်သွားတယ် မမ နဲ့တွေ့ချင်လိုက်တာ ငါ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ ငါ့မမကော ငါ့ကိုဘယ်လိုအကြံပေးမှာလဲမသိဘူးနော် ငါမှားခဲ့တယ် အလွန့်အလွန်ကိုမှားခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် င့ါဘဝကိုငါအရှုံးမပေးချင်သေးဘူး ဘာကြီးဘဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ရှင်သန်နေနိုင်ရမှာဘဲ ငါ့မမလည်း ရှိတယ် ငါ ဘဝ ခရီး ကိုရဲရဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ရမယ်။
ဟန်ဆောင်အင်မတန်ကောင်းပြီး ကျောရရုံသာကြံတဲ့ ဒီလူယုတ်မာကို လည်းစိတ်ထဲမှ ထုတ်ပစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ ကလင် ကလင် ဟောဖုန်းတစ်ခုလာနေတယ်။ ကိုကိုပဲဖြစ်မယ်။ ဒိုင်ယာရီ လေးရေ ပြီးမှ ရေးတော့မယ်.. အစောတုန်းက စိတ်ကူးမိခဲ့တာတွေ ရှေ့ခရီးလမ်းကို ရဲရဲဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတာတွေ မလုပ်နိုင်တော့တာ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။
…. ကျွန်မ ဝမ်းသာအားရ ဖုံးကိုင်လိုက်တဲ့ခါ ‘ညီမ တစ်ညဘယ်လောက်လဲတဲ့’ ‘ဘာကိုပြောတာလည်းမသိဘူးရှင့် ‘ ဆ်ိုတော့ ‘ဟို Movie ထဲကကောင်မလေးမှတ်လားတဲ့’ ‘တောင့်ဖြောင့်နေလို့ ချစ်စရာလေးမို့ခေါ်မိတာပါတဲ့’ ‘ကြိုက်ဈေးတောင်းပါတဲ့’ ဖုန်းကိုချလိုက်တယ်။
ရင်တွေကတော့ တဆတ်ဆတ် တုန်နေတုန်းဘဲ ငါ့ ဘဝ သွားပြီ။ ငါ့ ဘဝ ငါ့ ဘဝ လေး ကြေမွကုန်ပါပြီ ဒိုင်ယာရီလေးရယ် ငါ ငါ ငါ့ဘဝလောကဓံကြီးကိုငါအရှုံးပေးလိုက်ပါပြီဟာ ပေးလိုက်ပါတော့မယ်… ‘တောက်’ ညီမငယ်၏ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုပိတ်ရင်း ကျွန်မတောက်ခေါက်လိုက်မိသည်။ မိုက်ရိုင်းလိုက်သည့်အကောင်၊ လူမဆန်လိုက်သည့်အကောင်။
ထိုအကောင်မျိုးတွေနဲ့ ထိတွေ့စေနိုင်သော အဓိက တရားခံကိုလည်း စိမ်းစိမ်းကားကားကြည့်မိလိုက်သည်။ ခေတ်မှီ Touch ဖုန်းလေး လှပသည်။ အသုံးဝင်သည်။ သို့သော် အန္တရာယ်များသည်။ သေစေနိုင်သည်။
မျက်ရည် တို့က အတိုင်းသားစီးကျလာသည်။ ညီမလေး ကံဆိုးလိုက်တာကွယ်။ အော်.. ဒီဖုန်း ဒီလူယုတ်မာတွေကြောင့် ပန်းလေးတွေ ဘယ်နှစ်ပွင့် ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီလဲကွယ်…နှုတ်ဖျားမှ စကားတစ်ခွန်းဖွဖွရေရွတ်နေမိတော့သည်။ ‘ ဖုန်းဆိုတာ ပန်းလေးတွေကြွေစေဖို့ မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့သာ ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။’
ညီမငယ်လေးများဖတ်မိစေချင်လို့ ရှဲပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်
(‘ ဖုနျးဆိုတာ ပနျးလေးတှကွှေစေဖေို့ မဖွဈပါစနေဲ့လို့သာ ဆုတောငျးနမေိပါတော့တယျ)
အဈမ အဈမ သိလား’
‘သမီး မှာ ခဈြသူ ရှိနပွေီ’
‘ပွပါဦး ညီမ ရဲ့’
‘ဟောဒီမှာကွညျ့ ‘ မတျတပျရပျလကျြ ရိုကျထားသောယောကျြားလေးတဈဦး၏ပုံ
‘အမယျ မဆိုးပါဘူး ခြောသားဟ ‘
‘နာမညျက ဘယျသူလဲ ဘာလုပျလဲ ဘယျမှာနလေဲ’
‘အဟီး ဘာမှမသိဘူး နာမညျလေးတဈခုဘဲသိတာ’
‘ကိုထကျလှငျတဲ့ အဈမ ရဲ့’
‘ဒါကွောငျ့ အပြိုကွီး ဖွဈနတော’ ‘ဒီခတျေက online ခတျေလေ အဈမ ရဲ့’
‘online ခတျေ online ပျေါကတှတေ့ာ အဈမ ရေ’
‘ဟယျ အဲဒါကိုနငျက ခဈြသူ ထားတယျ’
‘အပြျောပေါ့ အဈမ ရယျ ”online ပျေါမှာ ဘယျသူကအသားလာထိလို့ရလို့လဲ အပွငျမှာ ရညျးစား ထားရငျတောငျ ဟိုတို့ဒီတို့ ခံနရေဦးမယျ။
အခုတော့ အေးဆေးစကားလေးဘာလေးပွော။ ပုံလေးဘာလေး ပို့ပေးရုံဘဲ။
ဘယျလောကျမိုကျလဲ။ အပွငျက ခဈြသူ တှထေကျတောငျစိတျခရြသေး’
‘မသိတော့ပါဘူးအေ။ ညညျးတို့ခတျေက အဆနျးတှခေညျြးဘဲ။ ကြုပျတို့တော့အံ့သွပွီးရငျး အံ့သွနရေတော့တာဘဲ။ ဂရုတော့စိုကျဦးနျော။ ကိုယျ့ကိုဘာထိခိုကျလာနိုငျမလဲစဉျးစားဦး။’
‘အမလေး အဈမ က မရှိရှိတာတှေ တှေးပူနပွေနျပွီ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ထိခိုကျမယျ့အလုပျမြိုးတော့ သမီးကလုပျပါ့မလားလို့။ စိတျခပြါအဈမရဲ့။ သတိထားပါ့မယျနျော။
‘မနှေငျး ရေ မနှေငျး’ အမခေ့ျေါသံကွောငျ့သတိပွနျဝငျလာရငျး
‘ဟုတျ ဘာလဲ အမေ’ ‘ဒီမှာ ရဲတှရေောကျနတေယျ၊ ‘ နငျ့ကို မေးစရာလေးတှရှေိလို့တဲ့
‘ ရဲတှမွေငျမှ ရဲရဲဖွာနသေော မွငျကှငျး တဈခုဆီသို့ အတှေးက ပွနျရောကျသှားသညျ….. အဲဒီနကေ့ မိညိုတို့အိမျမှပွနျလာပွီးပွီးခငျြး အိမျပွနျရောကျတော့ အရေးကွီးကိစ်စတဈခုဖွငျ့ ခကျြခွငျးခရီးထှကျခဲ့ရသညျ။ ခရီးကပွနျလာတော့ မိညိုတို့အိမျ အရငျဝငျမိသညျ။
‘မိညို ရေ မိညို’
‘အေးအေး သမီးလာလာ’ ‘ မိညို အိပျခနျးထဲမှာနဖေငျထိုးနပွေီ အခုထိမထသေးဘူး’
‘မိညိုရေ မိညို ထတော့လေ’ အိပျခနျးထဲကိုဝငျလာကတညျးကချေါလာလိုကျတာ အိပျရာ ထကျမှာလညျးမတှရေ့ခြေိုးခနျးရှဆေီ့တဖွညျးဖွညျးလြှောကျလာသညျ။ လော့ခထြားလား မခထြားလားကွညျ့မိသညျ။ လော့ခမြထား…တဖွညျးဖွညျးခငျြးတှနျးဖှငျ့လိုကျသညျ။ မွငျတှလေို့ကျ ရသညျ့ မွငျကှငျးကွောငျ့ မူးမိုကျ တုနျလှုပျသှားသညျ။ ရခြေိုးခနျးတဈခနျးလုံး ရဲရဲနီလကျြ လကျကောကျဝတျမှ စီးကလြာသော သှေးမြားဖွငျ့ သှေးအိုငျထဲဝယျ ခှခှေလေေးလဲကလြကျြရှိသော ကြှနျမ၏ ခဈြလှစှာသောညီမလေး အမလေး… လုပျကွပါအုံးမိညို.. မိညို… မိညိုရေ …
‘ ညီမ ညီမ ရရဲ့လား ‘
‘အျော အငျး ဟုတျကဲ့’
‘ဟုတျကဲ့’ ဒိုငျယာရီလေးတဈအုပျ စာအုပျကို ဖှငျ့လိုကျသညျနှငျ့ ဘယျတော့မှ မနေို့ငျမညျမဟုတျသော ဇာတျလမျးလေးတဈပုဒျ၊ မွငျကှငျး တှငျ စတငျပျေါလာသညျ။
ဒီနေ့ Facebook စသုံးတယျ Profile picture တငျပွီးတာနဲ့ လူတဈယောကျ အရငျစအပျတယျ။ ပထမဆုံး Facebook friend မို့ ဝမျးသာအားရလကျခံလိုကျမိတယျ။ အကောငျ့နာမညျက ထကျလှငျတဲ့ ကြှနျမ ပုံတငျတိုငျး ဘာပုံဖွဈဖွဈ likeပေးတယျ။ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ထကျလှငျကို သံဃောဇဉျတှယျလာမိတယျ။
‘လှလားဟငျ ‘ ဆိုရငျ ‘နတျသမီးလေးလိုလှပါ့ ‘ ‘ခြောလိုကျတာမှတျနတောဘဲတို့’။ ‘စားပါဦး ‘ ဆိုရငျ ‘တကယျလာစားရမလား ‘ တို့ ‘စားကောငျးမဲ့ပုံဘဲနျောတို့ ‘ အမွဲတမျး ကှနျမနျ့ပေးတယျ။ အပွငျမှာမမွငျဘူးပမေယျ့ စိတျထဲမှာတဖွညျးဖွညျးရငျးနှီးလာမိတယျ။
ကိုထကျလှငျဆျိုတာ.. ဖွူဖွူခြောခြောနဲ့စိတျထားကောငျးမယျ့ အဈကိုတဈယောကျဖွဈမှာပါလေ။ ဒီနအေိ့မျနဲ့ပွဿနာတကျတယျ။
Feelingsadဆိုပွီးဘာစာမှမရေးဘဲတငျထားလိုကျတယျ။ တငျပွီးပွီးခငျြးမကွာခငျ message တဈခုဝငျလာတယျ။ ကိုထကျလှငျဆီကပေါ့။ ‘မင်ျဂလာပါကလေးမ’ ‘ဟုတျကဲ့ပါ အဈကို’ ‘ဘာတှစေိတျညဈနတောတုနျး’ ‘ဒီလိုပါဘဲအဈကိုရာ အိမျနဲ့ကှိုငျတကျနလေို့’ ‘ မှနျမှနျပွောစမျး လူကွီး တှကေဆိုးတာလား ငါ့ညီမကဆိုးတာလား’
‘အေးပါ အေးပါ ငါ့ညီမကဝမျးနညျးနတေယျဆိုလို့လာမေးကွညျ့တာ’ ‘Bye ညီမ’ ‘စိတျခမျြးသာအောငျနပေါလရေဈ’ ‘ဟုတျကဲ့ပါအဈကို ကြေးကြေးပါ’ ခကျြခွငျးဆိုသလို out သှားခဲ့သောကွောငျ့ ကိုထကျလှငျအပျေါ ဆကျ၍မေးခငျြ သိခငျြ ပွောခငျြလာသညျ့စိတျမြားကို အတငျးမွိုခလြိုကျရသညျ။
‘မင်ျဂလာပါ ညီမ’ ‘ဟုတျကဲ့ပွောပါ ကိုထကျလှငျ’ ‘ညီမ ကိုမေးစရာရှိတယျ’ ‘မေးပါ အဈကို’ ‘ညီမမှာအိမျတှခွေံတှရေောငျးမယျ့အသိရှိလား’ ‘ဟငျ့အငျးမရှိဘူး အဈကို ဘာလို့’ ‘အဈကိုတို့ပိုကျဆံတှပေိုနလေို့ အဲဒါဝယျထားမလားလို့ အိမျစြေးတှကေတကျနတေော့လေ’ ‘အလဲ့ အလဲ့ သူဌေးပေါ့လေ ကွညျ့စမျး’ ‘မဟုတျပါဘူး သိနျးတဈထောငျလောကျဘဲခမျြးသာတာပါ’
‘အမလေးလေး အဲဒါသူဌေးမဟုတျဘူးလား’ ‘နောကျတာပါ ညီမ ရာ ဘယျကခမျြးသာရမှာလဲ အမဘေ့ကျကအမှရေလာလို့ပါ’ ‘အငျးပါ အဈကို တကယျလို့ ညီမတို့ဝနျးကငျြမှာရှိရငျ အဈကို့ကိုပွောမယျလေ’ ‘ဟုတျပွီ ဟုတျပွီ ညီမ Bye’
အမယျ့ ကိုထကျလှငျကသူဌေးဟ ဒီလိုနှငျ့ နတေို့ငျးစကားတှလောပွောနသေော ကိုထကျလှငျအား သံဃောဇဉျကွိုးက နှယျပငျကလေးလို ရဈတှယျလာခဲ့သညျ။ ဟို အေးမို့ ဆိုတဲ့စာရေးဆရာမလေး ရေးသလိုပေါ့ ” သံယောဇဉျ ကွိုး ဘယျသူပြိုး တနျခိုး ရှိနျဝါ ပွငျးလှတယျ။
” တကယျ တကယျ ကြှနျမ ရဲ့မခုနျဘူးသေးတဲ့နှလုံးသားလေး စခုနျလာခဲ့ပါပွီ။ ‘ကိုထကျလှငျ’ ‘ရှငျ အဲ ဗြာ အဲ ညောငျ အဲ ဗြောငျ’ ‘အာ ပွောငျစပျစပျနဲ့’ ‘စပျရငျရသေောကျလေ’ အာ သတေော့မယျ’ ‘မလုပျပါနဲ့ သားကလူပြိုလေးရှိသေးတယျ’ ‘ အငျ သလေေ’ ‘သနေိငျသေးပါဘူး လူပြိုကွီး ဘှကကြှတျမှ သခေငျြသပေလစေ့ေ’ ‘အခုထိခဈြသူမရှိသေးဘူးလား’ ‘ရညျးစားဆျိုလို့မူးလို့တောငျရှုစရာမရှိဘူး’ ‘ရုပျဆိုးလို့နမှောပါ’
‘အမယျ ဒီမှာကိုယျ့ပုံကွညျ့ ကွညျ့ ‘ ဆိုကာ ဓာတျပုံတဈပုံပို့ပေးသညျ။ ဟယျ ကိုရီးယား မငျးသားလေးလိုတကယျကိုခြောလှသညျ။
‘အလဲ့ အခြောသားဘဲ’ ‘အဲဒါကိုရညျးစားမရှိဘူးဆိုတော့ မယုံနိုငျစရာဘဲ ‘ ‘တကယျပါ ညီမ ရေ’ ‘အရငျက တဈယောကျရှိခဲ့ဘူးတယျ’ ‘အဈကိုအရမျးခဈြခဲ့တာ’ ‘ဒါပမေယျ့လညျးအဈကို့ကိုထားသှားခဲ့တယျ’ ‘Sorry ညီမ ရယျ”? သနားဂရုဏာစိတျတို့တဖှဖှယိုဖိတျလာသညျ။ ‘ငါ့အဈကိုက ဘာပွဈခကျြရှိလို့ ပဈသှားရတာတဲ့လညျး’ ‘မသိပါဘူး ညီမ ရယျ’
‘အဈကို ကတော့ခဈြနမေိဆဲဘဲ’ ‘အျော သူမှမခဈြနိုငျဘဲလေ’ ‘အငျး အဈကိုအလုပျလေးပျေါလာလို့’ ‘တာ့တာ ညီမ ရေ’ ‘ဟုတျကဲ့’ အျောသစ်စာမရှိသညျ့ မိနျးမတဈယောကျကွောင့ျင့ါအဈကို ရငျကှဲခဲ့တာပါလား စိတျမကောငျးလိုကျတာအဈကိုရာ ဒီနဆေို့ facebook သုံးတာ ခုနှဈလတောငျရှိတော့မယျ။
ကိုထကျလှငျ နဲ့လညျး တျောတျောရငျးနှီးလာပွီ။ နောကျပိုငျးတော့ ကိုထကျလှငျစကားမြားက အနှောငျ့အသှားမလှတျတော့ ခကျတာက ကြှနျမ ကိုယျတိုငျလဲအဲဒီအနှောငျ့အသှားမလှတျတာလေးတှကေိုဘဲ သဘောကနြမေိတာလေ။ ‘ညီမ ဖုနျးနံပတျလေးပေးနိုငျမလား’ ‘ဟုတျ
၀၉××××××××’ ‘အဈကို့ဖုနျးကဒီမှာ’ ‘ ၀၉××××××××’ ‘ ဖုနျး ဆကျလို့ရတယျမလားဆကျမယျနျော’ ‘ဟုတျကဲ့ဆကျပါ အဈကို’ ကိုထကျလှငျ က ဖုနျးနံပတျတောငျးသှားပွီးနောကျပိုငျး ဖုနျး ကိုတကွညျ့ကွညျ့ဖွဈနခေဲ့မိတာကြှနျမပါ။
‘အငျး ညီမ အဈကိုပွောစရာရှိတယျ’ ‘ပွောလေ အဈကို’ ‘အဈကို့ကိုစိတျမဆိုးရဘူးနျော’ ‘အာစိတျဆိုးစရာလား’ ‘အဈကို့ကိုမုနျးမသှားရဘူးနျော’ ‘အာ မမုနျးပါဘူး’ ‘ အဈကို့ကို ဘယျလိုစိတျထားထား အခုလျိုမြိုးလေးဘဝကျို မရုတျသိမျးသှားရဘူးနျော’
‘ဟုတျကဲ့ပါအဈကိုရယျ’ ‘ပွောမှာဖွငျ့ပွောပါ’ ‘ခဈြတယျ ညီမရယျ’ ‘တကယျတော့ ညီမကိုခဈြနမေိခဲ့တာကွာပါပွီ Profile picture လေး စမွငျကတညျးက ခဈြမိသှားတာပါ’ ‘တကယျပါ မလိမျပါဘူး ညီမရယျ’
‘ညီမမကျြနှာလေးမွငျနရေရငျအဈကိုအလိုလိုပြျောနမေိတာ’ ‘ညီမတငျသမြှပုံတှေ အဈကို အကုနျ save လုပျထားတယျ’ ‘ဟယျ တကယျလား’ ‘ဟုတျတာပေါ့ညီမရယျ’ ‘အဈကိုက ငယျခဈြဦးကွောငျ့ အခဈြ ကို အရမျးကွောကျနမေိခဲ့တာ’
‘ညီမ နဲ့တှမှေ့သူ့အလိုလို အခဈြက ပွနျရှငျသနျနိုးကွားလာခဲ့တယျ’ ‘အဈကို့ကို မခဈြနိုငျဘူးဆိုလဲရပါတယျနျော’ ‘ စိမျးကားဖို့တော့မကွံလိုကျပါနဲ့နျော’ ‘အဈကိုတောငျးပနျပါတယျ’ ‘အဈကို့ကိုပွနျခဈြပါနျော’ ‘အငျး စဉျးစားရဦးမယျလေ’ ‘စဉျးစားပါ စဉျးစားပါ ဘဝတဈလြှောကျလုံးလကျတှဲသှားရမယျ့ကိစ်စဘဲ’
‘သခြောစဉျးစားပါ’ ‘ပွီးရငျခဈြတယျလို့ဖွပေေးပါနျော’ ‘အငျ ပိုငျစိုးပိုငျနငျး’ ‘ဒီလိုစီးပိုးနရေငျတော့ မခဈြနိုငျတော့ပေါငျ’ ‘အာ အာ မလုပျပါနဲ့အဈကိုအဖွကေောငျးကိုစောငျ့မြှျောနမေယျနျော’ ‘အရမျးခဈြတယျကလေးမရယျ’ ‘တျောပါ လြှာအရိုးမရှိတိုငျး’ ‘တကယျခဈြလို့ပါကှာ’ ‘စပါယျရှယျ ကိုခဈြတာ’ ‘တျောပွီ’ ‘အာ အပိုတှေ တျောပွီ တျောပွီ ဒါဘဲ ဒါဘဲ’ Internet ကို ပိတျလိုကျသလိုမြိုး နှလုံးသားကိုလညျး ပိတျလို့ရရငျ သိပျကောငျးမှာဘဲနျော…ရငျတှခေုနျလှနျးလို့လေ။
‘ခဈြတယျ ကို’ ‘တကယျလားဟငျ’ ‘တဈကယျ နှဈကယျ သုံးကယျ လေးကယျ’ ‘တကယျလားလို့’ ‘အငျးပေါ့လို့’ ‘ဟ ဟ ဟ ပြျောလိုကျတာ ညီမ ရာ’ ခကျြခွငျး Phone call ဝငျလာသညျ။ ကိုထကျလှငျဆီက.. ‘အငျ ဘာလညျး online ကလညျးပွောလို့ရတာဘဲကိုရယျ’ ‘မရပါဘူး ဒီအသံခြိုခြိုလေးကိုကွားခငျြသေးတာပေါ့လို့’ ‘ခဈြလားဟငျ’
‘ဘယျနှဈခါမေးနမှောလဲ’ ‘သတေဲ့အထိ’ ‘တကယျကော တဈသကျလုံးခဈြမှာမို့လား’ ‘အခုဘဝမှ နောငျသံသရာအဆကျဆကျထိ’ ‘အပိုတှသေိပျပွောတာဘဲသိလား’ ‘တကယျခဈြလို့ပါ ကလေးမရယျ’ ‘ကိုယျ့ကို ခဈြလားဟငျ’ ‘အရမျးခဈြတယျ ကို’ ဖုနျး ကို ဆတျခနဲခပြဈလိုကျသညျ။
တဆတျဆတျခုနျနသေောရငျကိုတော့ ခပြဈလို့မရပါလားကှယျ.. ဒီလိုနှငျ့..ဖုနျး တှပွေော Messageတှပေို့နှငျ့ အပွငျမှာတဈခါမှ မတှဘေူ့းကွပမေယျ့ လလှေိုငျးထဲမှ ကွငျနာယုယမှုလေးတှကေိုပငျ ကနြေပျနမေိခဲ့သညျ။
ရညျးစားထားတယျဆိုတာဒီလောကျပြျောစရာကောငျးရငျ အစောကွီးကတညျးကထားခဲ့ပါတယျ ဒိုငျယာရီလေးရယျ ‘တောကျ အခြိနျတှနှေမွောလိုကျတာ ‘ ဟိဟိ ဒီစကားကွားရငျတော့ မမ ကြှနျမကိုထုတော့မညျ။
မမကို ခဈြသူသကျတမျး သုံးလပွညျ့မှ ဖှငျ့ပွောပွမညျဟုကွံထားခဲ့သညျ။ ဒီနကေ့ ခဈြသူသကျတမျးသုံးလပွညျ့ မိတျဆှဖွေဈတာ တဈနှဈနဲ့ တဈလပွညျ့တဲ့နေ့ မနကျစောစောထုံးစံအတိုငျး မမအိမျကိုပေါကျခလြာသညျ။ ကိုထကျလှငျဓာတျပုံကိုပွရငျးမိတျဆကျပေးမိတော့ ‘အခြောသားဟ ‘ဆိုပွီး အပွငျမှာကောမွငျဘူးလို့လားမေးသညျ။
ဟငျ့အငျး Online ခဈြသူလဆျေိုတော့ တျောတေျာ့ကို နားမလညျနိုငျသညျ့ မကျြနှာအမူအယာဖွဈသှားသညျ။ ‘သတိတော့ထားနျော ‘ လို့ပွောတော့ ‘မမ ကလညျး online မှာခဈြသူဖွဈတာ သမီးအသားတောငျ သူထိလို့မရဘူး ‘ ဆျိုတော့…စိတျခသြှားဟနျဖွငျ့ ‘မမ ခရီးသှားရဦးမယျ၊ တဈရကျလောကျတော့ကွာမယျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ဂရုစိုကျနျော၊ မမက အလုပျတှရှေုပျမှာမို့ ဖုနျးတောငျဆကျနိုငျမယျမထငျဘူး’
‘ဟုတျကဲ့မမ စိတျခပြါ’ မမ ထှကျသှားပွီးသညျနှငျ့ မကွာခငျ ကိုထကျလှငျဆီမှ ဖုနျးဝငျလာသညျ။ ‘ညီမ အဈကိုအလုပျကိစ်စနဲ့နိုငျငံခွားသှားရတော့မယျ’ ‘ညီမနဲ့အရမျးတှခေ့ငျြမိတယျကှာ’ ‘အဈကိုနဲ့အပွငျမှာတှနေို့ငျမလား’ ‘စိတျထဲမှာ ရုတျတရကျဝမျးနညျးလာမိသညျ’ ‘အငျးလေ အဈကို ဘယျမှာတှမေ့လဲ’
‘လူရှငျးတဲ့နရော စကားအေးဆေးပွောလို့ရမယျ့နရောပေါ့ ညီမရယျ’×××အဲ့ဒီနရောကျိုလာခဲ့နျော’ ‘ဆကျဆကျလာခဲ့နျော၊ အဈကို နိုငျငံခွားမသှားခငျ အရမျးကိုတှခေ့ငျြနမေိလို့ပါ’ ‘အငျးပါ အဈကိုရယျ’ မနကျအိပျယာထသညျနှငျ့ ကမနျးကတမျးရခြေိုးပွီး ခြိနျးထားသောနရောသို့ အသညျးအသနျသှားခငျြနမေိသညျ။ စိတျထဲမှာလညျးကို့ ကိုအရမျးတှခေ့ငျြနသေညျ။
ခြိနျးထားသညျ့နရောရောကျတော့တကယျ့ကိုလူပွတျသောနရောပငျ။ ကြှနျမကိုတှသေ့ညျနှငျ့ သူထိုငျနရောက အပွေးထလာပွီး ကြှနျမကို တငျးတငျးဖကျထားသညျ။ ကြှနျမငွငျးဆနျခငျြစိတျမရှိသလို ရုနျးကနျခငျြစိတျလဲမရှိ။
စိတျထဲမှာဝေးရတော့မညျဆျိုသောအသိတဈခုက နောငျလာမညျ့အနမျးမြားနှငျ့ အထိအတှေ့ အပှတျအသပျ အခြော့အမွူမြားကိုပါလိုကျလြောပေးစခေဲ့သညျ။ တဖွညျးဖွညျး ပွငျးရှလာပွီး ကတုနျကယငျပါ ဖွဈလာသညျ့အတှကျ ‘တျောပွီ ကို ရယျ ‘ ဟုအသံဖြော့ဖြော့နှငျ့တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ ကိုထကျလှငျက လူခွငျးခှာသညျ။ ပခုံးနှဈဖကျကိုကိုငျထားရငျး ‘ခဈြတယျညီမရယျအရမျးခဈြတာဘဲ အဈကိုကတဈနှဈလောကျကွာမယျထငျတယျ’ ‘အငျ တဈနှဈတောငျ’ ‘ဟုတျတယျ ညီမရယျ ။
ဒါကွောငျ့ထိနျးခြုပျမထားနိုငျတော့ဘဲ အကုနျလှတျထှကျကုနျတာပါဗြာ ”’ခှငျ့လှတျပါနျော ညီမ၊ ခှငျ့လှတျပါနျော’ ‘အဈကို့ကိုအထငျအမွငျသေးစိတျပကျြသှားပွီလားဟငျ’ ‘စိတျမဆိုးပါနဲ့နျော’ ‘မဆိုးပါဘူးလို့’ ‘အဈကို တဈခုလောကျ ထပျတောငျးဆိုလို့ရမလားညီမ ‘တဈခုတညျးပါကှာ တဈခုတညျးပါနျော’ ‘ညီမကို အဈကိုတဈနရောချေါသှားပါရစေ’
‘လိုကျမယျမလားဟငျ’ အသိစိတျတို့က ဘာကိုဆိုလို၍ ဘာကျိုရညျညှနျးနမှေနျးသိသျောလညျး အစောကအထိအတှအေ့ပှတျအသပျတို့ကွောငျ့ခုနျနသေောနှလုံးသားကမငွငျးဆနျခဲ့နိုငျတော့… ဤသို့ဖွငျ့ တညျးခိုခနျးတဈခု၏အခနျးတဈခနျးဆီသို့ ကြှနျမတို့နှဈဦးသား ရောကျသှားခဲ့သညျ။
ခုတငျဘေးမှာခွစေုံရပျရငျးတဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျကွညျ့ရငျးမှသညျ……. ကိစ်စဝိစ်စမြားပွီးဆုံးတော့ နှဈယောကျသားမောမောနှငျ့ ဖကျလကျြ အိပျပြျောသှားမိသညျကို သတိရမိသညျ။ ကိုယျလကျတို့က တဆဈဆဈကိုကျခဲနသေညျ။
ဘေးကိုကွညျလိုကျတော့ သူမရှိတော့။ အတှထေူ့းအငှထေူ့းမို့ ရူးမတတျခံစားရသညျ။ ကိုယျတကယျခဈြသူအား အပြိုစငျဘဝကို ပေးအပျလိုကျခွငျးသညျ စိတျထဲတှငျမညျမြှကွညျနူးမိကွောငျး လကျတှကွေုံ့မှပငျ.. ကိုက မနကျဖွနျစာခြုပျမှာ လကျမှတျထိုးမယျပွောတာပဲ။
အခုတော့ဘယျသှားနလေဲမသိ။ မွနျမွနျ ပွနျလာခဲ့ပါတော့ ကိုရယျ..ဒီမှာညီမလှမျးလှပါပွီ။ ထိုစဉျ အခနျးဝတံခါးက တဖွညျးဖွညျးပှငျ့လာသညျ။ ‘ ကိုကိုလားဟငျ’ ‘ကို ပွနျလာပွီလား’ ဟာ ကိုကိုမဟုတျ၊ လူစိမျးတဈယောကျ ‘ရှငျ ရှငျ ဘယျခနျးထဲဝငျလာတာလဲ ပွနျထှကျသှား ပွနျထှကျသှား’
‘ဟား ဟား’ ‘ရှငျ ရှငျ ကြှနျမကိုကိုရောကျလာရငျ ရှငျ့ကိုသတျမှာနျော’ ‘ကိုကို ပွနျမရောကျခငျထှကျသှား သှား လို့ပွောနတေယျ’ ‘အေးဆေးပေါ့ကောငျမလေးရယျ’ ‘ညညျးကိုစြေးကွီးပေးဝယျထားရတာ ဘာလို့နှငျထုတျနတောတုနျး’ ‘ရှငျ ဘာစကားပွောတာလဲ’ ‘ဟုတျတယျလေ..မငျးသိပျခဈြ၊ သိပျမွတျနိုးရပါတယျဆိုတဲ့ မငျးကိုကိုက မငျးကို ငါ့လကျထဲရောငျးစားသှားတာလေ’ ‘ထပျပွောလိုကျသေးတယျ’
‘ဒါလေးကို ကွာကွာစောငျ့ပွီးမှ ခှငျဖနျလိုကျနိုငျလို့ အပြိုဖူးလေးတော့ ခွှပေါရစဆေိုပွီး ပိုကျဆံထပျပေးတာတောငျမယူဘဲ အပြိုရညျဖူးလေး ခွှသှေားသေးတယျ’ ‘ဟား ဟား လာပါကှာ’ ‘မငျးကိုကိုနဲ့တုနျးကအရမျးကောငျးတယျမလား’ ‘မငျးကိုကိုထကျ တို့ကဝါရငျ့ပါတယျ’ ‘မငျးကိုကိုထကျကောငျးစရေမယျ’ ‘လာထား ‘ ဆိုကာကုတငျပျေါရောကျလာသညျ။
ခှနျအားရှိသမြှ ရုနျးကနျအျောဟဈပါသျောလညျး….. ဘေးတစောငျးလှဲ မကျြရညျတသှငျသှငျစီးကနြရေငျး ခှခှေလေေးလှဲနမေိသညျ။ လူကွီးက အဝတျအစားတှပွေနျဝတျရငျး ‘ ဒီမယျကလေးမ မငျးကွိုကျတဲ့ဆီတိုငျ ပွောခငျြတာက အခုငါတို့ဖွဈပကျြခဲ့သမြှကို ဗီဒီယိုရိုကျထားတယျ။ မငျးတိုငျတာနဲ့ online ပျေါပွနျ့ပွီးသားဘဲ သဘောပေါကျတယျဟုတျ’ ‘လုပျရဲရငျတော့ လုပျကွညျ့ပေါ့ကှာ ဟား ဟားဟား ‘ အားရပါးရရယျကာထှကျသှားသညျ။
သှားပွီ၊ သှားပါပွီ.. ကြှနျမ ဘဝတဈခုလုံး ရစေုနျမြောပါသှားသလို ခံစားမိသညျ။ ကိုရယျ ညီမရဲ့ယုံကွညျမှုတှကေို အလှဲသုံးစားလုပျရကျတယျနျော၊ ကြှနျမ ကို ရောငျးစားသှားတာဆို။ ခှငျဖနျသှားတာဆို။ ဟုတျလား။ ပွနျလာခဲ့ပါကိုရယျ။ကိုမရှိတုနျးအဲလူကွီးလာစျောကားသှားတာနမှောပါ။
ကိုပွနျလာရငျကြှနျ မကိုလကျထပျမှာပါ နျော .. နျော။ ဖုနျးဆီကိုလကျလှမျးသညျ။ ကို့ဖုနျးကိုလှမျးချေါသညျ။ စကျပိတျထားသညျ။ ထပျခါထပျခါချေါသညျ။ စကျပိတျထားသညျ။ တဈနှဈကြျောကွာ ရငျးနှီးမှုတှေ၊ ခဈြခဲ့မိတဲ့အခဈြတှကေ အခုလိုခွှခေခြံရဖို့ဘဲလား။
‘ ရကျစကျလိုကျတာ ကို ရယျ။ ရကျစကျလိုကျတာ။’ မကျြရညျကိုထိနျး စိတျကိုသိမျး၍ ဒယီးဒယိုငျဖွဈနသေောခွလှေမျးတို့ဖွငျ့ အိမျကိုပွနျလာခဲ့မိသညျ။ အိပျခနျးထဲရောကျမှ တံခါးကိုပိတျရငျး ခေါငျးအုံးပျေါမကျြနှာအပျ၍ အားရပါးရငိုခမြိသညျ။
တဈကိုယျလုံး အထိမခံနိုငျလောကျအောငျ ကိုကျခဲနသေျောလညျး နှလုံးသားရဲ့နာကငျြကိုကျခဲမှုကျိုမှီနိုငျပါဦးမလား ‘မမ ကလညျးဒီနမှေ့ခရီးထှကျသှားတယျ မမ နဲ့တှခေ့ငျြလိုကျတာ ငါ ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲ ငါ့မမကော ငါ့ကိုဘယျလိုအကွံပေးမှာလဲမသိဘူးနျော ငါမှားခဲ့တယျ အလှနျ့အလှနျကိုမှားခဲ့တယျ ဒါပမေယျ့ င့ါဘဝကိုငါအရှုံးမပေးခငျြသေးဘူး ဘာကွီးဘဲဖွဈနဖွေဈနေ ရှငျသနျနနေိုငျရမှာဘဲ ငါ့မမလညျး ရှိတယျ ငါ ဘဝ ခရီး ကိုရဲရဲလြှောကျလှမျးနိုငျရမယျ။
ဟနျဆောငျအငျမတနျကောငျးပွီး ကြောရရုံသာကွံတဲ့ ဒီလူယုတျမာကို လညျးစိတျထဲမှ ထုတျပဈနိုငျဖို့ ကွိုးစားရမယျ။ ကလငျ ကလငျ ဟောဖုနျးတဈခုလာနတေယျ။ ကိုကိုပဲဖွဈမယျ။ ဒိုငျယာရီ လေးရေ ပွီးမှ ရေးတော့မယျ.. အစောတုနျးက စိတျကူးမိခဲ့တာတှေ ရှခေ့ရီးလမျးကို ရဲရဲဆကျလြှောကျမယျဆိုတာတှေ မလုပျနိုငျတော့တာ တောငျးပနျပါတယျနျော။
…. ကြှနျမ ဝမျးသာအားရ ဖုံးကိုငျလိုကျတဲ့ခါ ‘ညီမ တဈညဘယျလောကျလဲတဲ့’ ‘ဘာကိုပွောတာလညျးမသိဘူးရှငျ့ ‘ ဆျိုတော့ ‘ဟို Movie ထဲကကောငျမလေးမှတျလားတဲ့’ ‘တောငျ့ဖွောငျ့နလေို့ ခဈြစရာလေးမို့ချေါမိတာပါတဲ့’ ‘ကွိုကျစြေးတောငျးပါတဲ့’ ဖုနျးကျိုခလြိုကျတယျ။
ရငျတှကေတော့ တဆတျဆတျ တုနျနတေုနျးဘဲ ငါ့ ဘဝ သှားပွီ။ ငါ့ ဘဝ ငါ့ ဘဝ လေး ကွမှေကုနျပါပွီ ဒိုငျယာရီလေးရယျ ငါ ငါ ငါ့ဘဝလောကဓံကွီးကိုငါအရှုံးပေးလိုကျပါပွီဟာ ပေးလိုကျပါတော့မယျ… ‘တောကျ’ ညီမငယျ၏ ဒိုငျယာရီစာအုပျကိုပိတျရငျး ကြှနျမတောကျခေါကျလိုကျမိသညျ။ မိုကျရိုငျးလိုကျသညျ့အကောငျ၊ လူမဆနျလိုကျသညျ့အကောငျ။
ထိုအကောငျမြိုးတှနေဲ့ ထိတှစေ့နေိုငျသော အဓိက တရားခံကိုလညျး စိမျးစိမျးကားကားကွညျ့မိလိုကျသညျ။ ခတျေမှီ Touch ဖုနျးလေး လှပသညျ။ အသုံးဝငျသညျ။ သို့သျော အန်တရာယျမြားသညျ။ သစေနေိုငျသညျ။
မကျြရညျ တို့က အတိုငျးသားစီးကလြာသညျ။ ညီမလေး ကံဆိုးလိုကျတာကှယျ။ အျော.. ဒီဖုနျး ဒီလူယုတျမာတှကွေောငျ့ ပနျးလေးတှေ ဘယျနှဈပှငျ့ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရပွီလဲကှယျ…နှုတျဖြားမှ စကားတဈခှနျးဖှဖှရရှေတျနမေိတော့သညျ။ ‘ ဖုနျးဆိုတာ ပနျးလေးတှကွှေစေဖေို့ မဖွဈပါစနေဲ့လို့သာ ဆုတောငျးနမေိပါတော့တယျ။’
ညီမငယျလေးမြားဖတျမိစခေငျြလို့ ရှဲပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော